समय : स्वर्गको एक टुक्रा कुटी गाउँ ! « Media for all across the globe
समय : स्वर्गको एक टुक्रा कुटी गाउँ !
नेपाल र भारत पछिल्लो सीमा विवादपछि चर्चाको सतहमा आएका नेपाली गाउँहरु हुन् – गुञ्जी, नाबी र कुटी। वि.सं २०३५ सालदेखि भारतीय पक्षले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा अतिक्रमण गरेपछि यी तीन गाउँहरु पनि भारतको अधिनमा छन्। उच्च हिमाली क्षेत्रमा रहेको कुटी गाउँ लिम्पियाधुराबाट नजिकै पर्दछ। यो गाउँ समुन्द्री सतहबाट ११ हजार ५ सय फीटको उचाईमा रहेको छ।
भारतले अहिलेसम्म भारत–चीन सिमानाको अन्तिम गाउँका रुपमा चित्रण गर्ने गरेको छ। भारतबाट अतिक्रमित नेपाली गाउँ कुटी पर्यटन र ऐतिहासिक हिसाबले महत्वपूर्ण मानिन्छ। कुटी गाउँ द्वापर युगका पाण्डवहरूसँग पनि सम्बन्धित रहेको रहेको हिन्दुवादी अभियन्ता मास्टर थापाले बताए। द्वापर युगमा पाण्डवहरु स्वर्गारोहण अघि लामो समयसम्म कुटी उपत्यकामा बसेको विस्वास गरिदैँ आएको छ। पाण्डवकी आमा कुन्तीलाई उपत्यका खुब् मन परेको र पछि उनैको नामबाट कुटी राखिएको बताइन्छ।
हिन्दुहरुको पवित्र तिर्थस्थल आदि कैलाश यात्रामा पर्ने कुटी अन्तिम गाउँ समेत हो। कतिपय कुटी हुदैँ समेत कैलाश मानसरोवर जाने गर्दछन्। कैलाश मानसरोवर पुग्न नसक्नेहरु भने आदि कैलाश अबलोकनपछि नै फर्कने गरेको हिन्दुवादी अभियन्ता थापाले जानकारी दिए।
आमा कुन्तीसँगै बस्नका लागि बनाइएको ढुंगेचौतारी अहिलेपनि जस्ताको–तस्तै रहेको कुटी गाउँका धामी रामसिंह कुटियालले स्थानीय पत्रिकासँग भनेका छन्। उनका अनुसार पाण्डवकी आमा कुन्तीको नामबाट कुटी राखिएको थियो। कुटी गाउँ नजिकै यहाँ पाण्डव पहाडहरू समेत रहेका छन्। उक्त पहाडमा पाँचवटा चुचुराहरु छन्– जुन पाँच पाण्डवहरूको प्रतीक मानिन्छ।
कुटीसँगै नाबी र गुञ्जी गाउँ समेत भारतको अतिक्रमणसँगै नेपाली पहुचभन्दा बाहिर रहेका छन्। हालसम्म यहाँका बासिन्दाहरु कानुनी रुपमा भारतीय नागरिक बनेका छन्। गुञ्जी, नाबी र कुटी गाउँ प्राकृतिक सुन्दरतासँगै धार्मिक तवरले समेत विशेष रहेका छन्। यी गाउँहरुमा नेपाल–भारत सीमा विवाद सतहमा आएपछि मनोमानी ढंगले विकासे कामहरु गरिरहेको छ। यी तीन गाउँमा ३ हजार बढी जनसंख्या रहेको अनुमान गरिएको छ।